What to prepare to getafirst job for Fresh Graduate? ( Part-II) ﻿
What to prepare to getafirst job for Fresh Graduate? ( Part-II)
Tags: preparation fresh graduate attitude CV Resume Job Interview
အပိုင်း (၂) မှာတော့ Hongkong Shindler မှာ လုပ်ကိုင်နေသော Group Talent Attracting & Employee Engagement Manager Ms Laura Cho မှ အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ CV ကို ဘယ်လိုပြင်မယ်၊ အင်တာဗျူးမသွားခင်ဘာတွေကို လုပ်ကြမလဲ၊ အင်တာဗျူးကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကို ပါ ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးထားပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Audio မှာ ဆက်လိုက်နားဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်။